सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्नु कति उचित?
प्रजु पन्त बुधबार, वैशाख २४, २०७७, २२:१०
काठमाडौं- शिक्षा, तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बैसाख २२ गते विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सम्बन्धमा सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा अनलाईनका कक्षा संचालनका नाममा कुनै पनि शुल्क असुल नगर्न र नयाँ भर्नाका कुनै पनि कार्यक्रमसमेत संचालन नगर्न मन्त्रालले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो।
'हाल सबै विद्यालयहरूको भर्ना तथा पठनपाठन स्थगित रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्न, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरू नगर्नु नगराउनु हुन सूचित गरिन्छ,' मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको सूचनाअनुसार कक्षा ९ सम्मको नतिजा अहिल्यै प्रकाशित गरिहाल्नुपर्ने जरुरी छैन। तर विद्यालयहरूले सरकारको त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बरू सामाजिक सञ्जालमा नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यालयहरूको होडबाजी नै चलको छ।
मोरङ, दाम्राभिटाको दुर्गा माध्यमिक विद्यालयले बैसाख ७ गते फेसबुक पेजमार्फत् नतिजा प्रकाशन गर्यो‍।
कक्षा ९ सम्मको नतिजा प्रकाशनमा कोको विद्यार्थी उत्तीर्ण भए र कोको अनुउत्तीर्ण भनेरसमेत उल्लेख थियो।
मोरङको विद्यालयमा मात्र हैन, लमजुङको बेँशीसहरमा रहेको एक विद्यालयले पनि त्यसरी नै परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ। विद्यालयले यसरी नतिजा प्रकाशन गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको जनाएको छ।
फेसबुक पेज मार्फत नतिजा प्रकाशीत गर्दै उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको नामसमेत प्रकाशित गरेका छन्।यस्तो अभ्यास गलत भएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ।बालबालीकालाई मानसिक आघात पुग्ने तथा गोपनीयताको अक हनन हुने भन्दै शिक्षाविद्हरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
यसरी नतिजा प्रकाशन गर्दा विद्यार्थीलाई टर्चर हुने बताउँछन्, पोखरा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा १० वर्षदेखि अध्यापन गराइरहेका शिक्षक सुरज हजारे दाहाल। ‘विद्यार्थीलाई टर्चर नहोस् भनेर ग्रेडको व्यवस्था भयो। तर फेसबूकमा राख्नु त मुर्खता हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘स्कूलभित्र त एउटा साथीले लुकाए अर्कोबाट थाहा हुन्छ। तर फेसबुकमा राख्दा कम ग्रेड ल्याउनेलाई अपमान गर्नु हो।’ दाहालकाअनुसार ज्ञानोदय माविले फोन गरेर नै विद्यार्थीको नतिजा बताइदिएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा नतिजा राख्दा गोपनीयता हनन हुने लेखक सावित्री गौतम बताउँछिन्। ‘बालबालिकाको पनि गोपनीयता हुन्छ,' उनी भन्छिन्, ‘त्यसरी नतिजा प्रकाशन गर्नु उनीहरुको गोपनीयतामाथिको अत्याचार हो।’
सामाजिक सञ्जालमा नतिजा राख्दा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भनी छुट्याएर राख्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला। उनका अनुसार नतिजाको सामान्य जानकारी दिए पनि नामै उल्लेख गरेर नतिजा प्रकाशन गर्नु उपयुक्त होइन।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ता दीपक शर्माले विद्यालयको नतिजा प्रकाशन गर्न हतार नभएको र प्रकाशन गर्न परेको खण्डमा म्यासेज गरेर जानकारी दिनुपर्ने बताए। ‘संघीयतामा गए सँगै विद्यालय स्थानीय तह अन्र्तगत हो, शर्माले भने कसरी नतिजा प्रकाशन भइरहेको छ भन्नेबारे स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। गोपनीयता भगं नहुने गरि नतिजा दिनुपर्छ सबैलाई जानकारी दिने होइन।’
जसले विद्यार्थी विवरण खुल्ने गरी राख्नुभएको छ, तुरुन्त हटाउनुस् : देवीराम आचार्य, अध्येता
परिस्थिति जटिल भैदिदा विद्यालयका नियमित गतिविधिमा अवरोध पुग्यो। परीक्षा सकिएपछि नतिजा प्रकाशनको एउटा चक्रीय क्रममा जुट्नै पर्‍यो, विद्यालय तथा शिक्षकहरु यसमा जुट्नुभयो, नतिजा तयार गर्नुभयो त्यो राम्रो पक्ष हो।
अपवादको रुपमा बाहेक देशभरका ९९ प्रतिशत विद्यालयमा कक्षा १ देखि ७ सम्म विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदैनन्। त्यसैले यस्तो जटिल परिस्थितिमा नतिजा नतिजा भन्नु पर्ने अवस्था थिएन। सबैलाई माथिल्लो कक्षाका पाठ्यपुस्तक पढ्दै गर्नु भनेको भए हुने। कतिपय स्थानीय तहले र प्रदेशले नतिजा प्रकाशन गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरे, त्यो नै आवश्यक थिएन।
कतिपय विद्यालयले एफएमबाट नतिजा सुनाए, कतिपयले स्थानीय टेलिभिजनबाट पनि गरे। र अहिले व्यापक रुपमा फेसबुकमा विद्यालय नतिजा प्रथम द्वतीय घोषणा गरिएका, जिपिए र कूल अङ्क लेखिएका, स्थान पहिलोदेखि पचासौँ भनेर छुट्टाइएका, पास र फेल भनेर उल्लेख गरिएका मात्र नभएर दुई विषय लागेका, तीन विषय लागेका, चार विषय लागेका असफल भनेर राखिएको छ।
यो अभियानमा विद्यालय मात्र होइन, स्थानीय पालिकाहरु पनि लागेका छन्। कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालयमा पढ्न नचाहने र फेल हुने र नजान्ने बन्न त चाहँदैन। शिक्षकहरु जसले सानो पनि आलोचना स्वीकार गर्नसक्नुहुन्न वहाहँरुले ती सबै बालबालिकाको मानमर्दन गरिरहनु भएको छ। सिकाइ मात्र गुणस्तर हो र भन्दै प्रतिप्रश्न गर्ने र अहिले त्यहि सिकाइका आधारमा कसैलाई खुब जान्ने र कसैलाई नजान्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा रङ्गाउने काम भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा के राख्ने, के नराख्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण त कसलाई के दिनु पर्ला र? तर धेरै समस्या यसमा देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई होच्याउने काम राम्रो होइन, अहिले जति पनि नतिजा निकालेर जिपिए र ग्रेडका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। ती सबैले अबोध बालबालिकाहरुलाई पर्ने मानसिक असरको वारेमा ध्यान पुगेको छैन।
यो अभियानलाई रोक्ने दायित्व भएका धेरै स्थानीय तह आफैले कक्षा ८ को नतिजा यसरी नै प्रकाशित गरेका छन्। यसलाई शिक्षकहरुले तत्काल सच्चाउने र रोक्ने कार्य गर्न जरुरी छ। बालबालिकाहरुमा यसबाट पर्ने मनोवैज्ञानिक असरको वारेमा सचेत हुनैपर्छ। नतिजा प्रकाशन गर्नै पर्ने बाध्यता नै छैन, यदि नतिजा प्रकाशन गर्नैपरे सूचना मात्र दिन सकिन्छ।
केही विद्यालयले सूचना मात्र प्रकाशन गरेर नतिजाका लागि कक्षा शिक्षकलाई सम्पर्क गर्नु भनेर राम्रो काम पनि गरेका छन्। तर जसले विद्यार्थीका सबै विवरण खुल्ने गरी सूचनाहरु राख्नुभएको छ, त्यो तत्काल हटाउने र नगर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
बाह्रबिसेमा बाढीमा बेपत्ता भएकाकाे खोजीका लागि सेनासहितकाे टाेली परिचालन सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरुकाे खाेजी कार्य जारी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्र बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित जम्बू, व... शुक्रबार, असार २६, २०७७
जाजरकाेटकाे बारेकोटमा पहिराेले घर बगाउँदा १२ जना बेपत्ता बारेकोट गाउँपालिका– ४ सार्कीगाउँमा गए राति पहिराले घर बगाउँदा १२ जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा दुई घरपरिवारका ५२ वर्षीय घरमूल... शुक्रबार, असार २६, २०७७
ह्याण्ड स्यानिटाइजर दर्ता अनुमतिका लागि समय थप गरेकोमा औषधि उत्पादकहरुको आपत्ति नेपाल औषधि उत्पादक संघले ह्याण्ड स्यानिटाइजरको दर्ता अनुमतिका लागि सरकारले तीन महिना म्याद थप गरेकोमा विरोध जनाएको छ। शुक्रबार, असार २६, २०७७
१०० कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर नवीरणको प्रकृया अन्तिम चरणमा शुक्रबार, असार २६, २०७७
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अर्थ समितिबाट पारित शुक्रबार, असार २६, २०७७